अनमोलले छाडे साम्तेनको ‘धुपौरे’ ! « Pariwartan Khabar
अनमोलले छाडे साम्तेनको ‘धुपौरे’ !
२१ कार्तिक २०७६, काठमाडौँ
नायक अनमोल केसी यतिबेला चलचित्र धुपौरे को तयारीमा व्यस्त भैरहेका छन् भन्ने चर्चा सिनेवृतमा चलेको छ । उनले यसै चलचित्रका लागि आफ्नो तौल समेत बढाइरहेका थिए । तर अन्तिम चरणमा आएर अनमोलले चलचित्रबाट हात झिकेको कुरा बाहिर आएको छ ।
हुन त अनमोल आफैले यसबारे केही जानकारी दिएका छैनन् । तरपनि आजभोली सिनेवृतमा अनमोलले अब धुपौरे मा काम नगर्ने हल्ला सुरु भएको छ । अनमोल हत्तपत्त चलचित्र साइन गरिहाल्दैनन् । उनी स्क्रिप्ट चित्तबुझ्दो नभएसम्म कुनै चलचित्रमा काम गर्दैनन् । त्यसैकारण पनि बर्षमा १ मात्र चलचित्र अनमोलले गर्ने गरेका छन् ।
धुपौरे को स्क्रिप्टमा परिवर्तन आएको र सुटिङका लागि चलचित्र निर्माण टिमले हतार गरेकाले अनमोलले चलचित्रबाट हात झिकेको कुरा बाहिर आएको हो । तर चलचित्रका निर्देशक साम्तेन भुटिया भने यो कुरा गलत भएको बताउँछन् । उनले चलचित्रबाट अनमोलले हात नझिकेको बताउँछन् ।
१३ जेठ २०७७, काठमाडौँ यतिबेला सामाजिक सञ्जालमा अन्तरजातीय विवाह गर्न जान खोज्दा मारिएका नवराज विकको
१३ जेठ २०७७, काठमाडौँ यतिबेला सामाजिक सञ्जालमा जाजरकोटका नवराज विकको हत्याको कुराले चर्चा पाइरहेको छ